အသစ်ကလေးကိုကြိုဆိုပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အသစ်ကလေးကိုကြိုဆိုပါ
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ဒါထက်နည်းနည်းလေး ပိုရေးရင်ကောင်းမှာဗျ။
ဟုတ်ပါ့ သူရေးထားတာများလို့ဖတ်ရတာမျက်စိတွေကို ညောင်းသွားတာပဲ။
အသစ်တွေကို ကြိုဆိုကြတဲ့ မောင်သန်းထွဋ်ဦး နှင့်တကွ အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ၊
ပို့စ်ကို ဘယ်နေကနေ ဘယ်လိုရေးလဲ၊ ပုံလေးတွေဘယ်လိုတင်လဲ၊ အသစ်တွေအတွက် ရှောင်ရန်/ဆောင်ရန် သိသင့်တာလေးတွေ မြန်မာလို(အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်ပါ၊ အင်တာနတ်တောင် သုံးဖြစ်တာမကြာသေးပါ)နဲနဲချင်းရှင်းပြပေးနိုင်ရင် ပိုရွေ့ပိုရွေ့ ကျေးဇူးပါ။
ဂေဇက်ကလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်….ပုမ နဲ့ မောင်မောင်ရေ…စာရေးချင်တယ်ဆိုလို့လဲဝမ်းသာပါဂျောင်း..
ပို့စ်ကို ဘယ်နေကနေ ဘယ်လိုရေးလဲ၊ ပုံလေးတွေဘယ်လိုတင်လဲ၊ အသစ်တွေအတွက် ရှောင်ရန်/ဆောင်ရန် သိသင့်တာလေးတွေကိုအရင် ရှာဖတ်ပါ…ဂေဇက်ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာ ညာဘက်အချမ်းမှာ..2. Learn-how-to-do-
Do & Don’t (Rules) ဆိုတာရှိတယ်လေ….စာရေးပုံရေးနည်း ပို့စ်တင်ပုံတင်နည်းကိုတော့…
ဂေဇက်ရဲ့ မူလပထမလက်ဟောင်း ဆရာမကြီး ဒေါ်စိန်ပေါက်ပေါက် ကသင်ပေးပါလိမ့်မယ်..
ခုတော့ အီ အီးပါနေလို့ တဲ့ ခဏစောင့်ကြနော်…
ဟိုက် …. ဘပု အမျိုးလားမသိဘူး … မဟုတ်ပါစေနဲ့ … မဟုတ်ပါစေနဲ့။။။။။။ :grin: :grin:
နောက်တာနော် … ကြိူဆိုပါတယ်…
ကိုအောင်ပု ရည်းစားဆိုရင် ကြိုဆိုပါတယ်…။
ဟိုအပျိုဂျီးတစ်အူး ပြောသလိုဆိုရင် လယ်တစ်ကွယ် ပိုင်တွားပြီပေါ့
ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ…….. ဝယ်ခမ်းပါ ဝယ်ခမ်းပါ..
ရွှေတိုက်က ဝဲကမ်းတော့လဲ နာ လာရတာပေါ့……….. နင်ဟာလေ ပြောကိုမပြောချင်ဘူး… အသစ်ကလေးဆိုတာနဲ့ ပြေးလာတော့တာပဲ……..အုပ်ထိန်းသူမရှိဘူးလား…….ဒါမှ မဟုတ် ဖုန်းဆက်လိုက်ရမလား……..PU MA ကိုလဲ အားလုံးက ကြိုဆိုပါတယ်………. ဟုတ်တယ်မလား ရွှေတိုက်
ကြိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ် ..
ရေးလည်း ရေးပါ …
အားပေးပါတယ် ခင်ဗျာ …
အရင်ဆုံး ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ဘာမှမစဉ်းစားပါနဲ့ စိတ်ထဲရှိတာ ချရေးလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းတွေရေးမလား။ ငယ်ဘဝအကြောင်းတွေကို ပြန်ပြီး မြင်ယောင်ချင်သလား။ ဒါမှမဟုတ် တွေ့ကြုံရတဲ့ သတင်းတွေကို တင်မလား ကြိုက်တာသာ ရေးလို့ရပါတယ်။ ရေးချင်စိတ်ရှိလာခဲ့ရင် ရေးသာရေးပါ။ အားပေးနေပါတယ်။
စကားမစပ် ပုမ ဆိုတော့ မပု လား
သာကေတကတော့ မဟုတ်လောက် ဖူးနော်….
ပုမ က အမြဲဘုကျလို့အဖေပေးထားတဲ့နာမည်လေ
အလဲ့ … သူက အနော်တို့ သဂျီးလည်း သိနေဒယ် ..
သဂျီး မကြိုဆိုလို့ စိတ်ကောင်းဖူးတဲ့ …
သူက သဂျီးကြိုတာကို မျှော်နေတာ … တဲ့ ။
သဂျီး ကြိုလိုက်ပါဦးဂျ …